ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး၊ အကောင်းဆုံးမျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးကို China Manufacturer မှပေးပါသည်
Home > ထုတ်ကုန်များ > မျက်နှာဖုံး
မျက်နှာဖုံး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ခွဲစိတ်ကုသမျက်နှာဖုံး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အကောင်းဆုံးမျက်နှာဖုံး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
PM2.5 KN95 မျက်နှာဖုံးဖယ်ရှားနိုင်သောမျက်နှာဖုံးနေ့စဉ်ကာကွယ်မှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျန်းမာရေးအတွက် Earloop မျက်နှာဖုံးများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခါသုံးသုံး Ply Ultralight Weight Face Mask ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
50 pcs တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးများ 3-Ply  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Earloop ပါးစပ်အဆင်ပြေသောသန့်ရှင်းသောမျက်နှာဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်နှင့်ကာကွယ်မှုများအတွက်ခွဲစိတ်မျက်နှာဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး Disposable မျက်နှာမျက်နှာဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
10 Pcs Professional Disposable Face Masks  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပါးစပ်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးသည်အလွှာ ၃ ခုမှ ၁၀၀% ချည်၊  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကာအကွယ်အတွက်ဖယ်ရှားနိုင်သောမျက်နှာဖုံးများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကာအကွယ်အတွက်ဖယ်ရှားနိုင်သောမျက်နှာမျက်နှာဖုံး -50pcs / box  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မျက်နှာမျက်နှာဖုံးအသွင်အပြင်များ: အကာအကွယ်အလွှာ (၃) ခု၊ ထိရောက်သောစီစစ်ခြင်း။ အလွှာပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အလွှာအလွှာမှကာကွယ်မှု၊ အန္တရာယ်ရှိသောစစ်ထုတ်ခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊...
Medical Disposable Face မျက်နှာဖုံးသည်များသောအားဖြင့်ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောအလွှာတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ ပြုလုပ်သည်။ အဓိကထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတွင်အရည်၊ filter အမှုန်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သောအရည်ပျော်မှုမှလွင့်ခြင်း၊ spunbond၊...
မျက်နှာဖုံးအသေးစိတ်: pie 50pieces / box ကို ထုပ်ပိုး အသစ်သော PP ပစ္စည်းမပါ ၀ င်သည့်အထည်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာသုံးမျိုးပါသောမျက်နှာ၊ ရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့်အသက်ရှူလွယ်သည် ပလတ်စတစ်နှာခေါင်းချောင်း၊ အလူမီနီယမ် - ပလတ်စတစ်နှာခေါင်းချောင်း၊...
တရုတ်နိုင်ငံ မျက်နှာဖုံး ပေးသွင်း
၁။ အလယ်အလတ်မဟုတ်သောအလယ်ဗဟိုတွင်မပါ ၀ င်သောထည်သုံးလုံးကိုအော်ဂဲနစ်မဟုတ်သော antibacterial ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည် antibacterial နှင့် Deodorizing အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။
၂။ အရည်အသွေးမြင့်သော polypropylene မဟုတ်သောထည်၊ အလွှာသုံးလွှာထူသောကာကွယ်မှုဒီဇိုင်း။ အတွင်းပိုင်းအလွှာသည်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးနူးညံ့။ အစိုပြေခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်ယားခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
3. အနိမ့်အထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ ပျော့ပျောင်း။ သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသည်။ အထူးဒီဇိုင်း - ပျော့ပျောင်းသော elastic နားချိတ်သည်လဲကျရန်မလွယ်ကူပါ၊ လက်ဖြင့်ထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာဖုံးကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
4. Ultrasonic ချောမွေ့သောအစွန်းဖိခြင်းသည်နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်နှင့်မေးစေ့တို့ကိုပြည့်ပြည့် ၀၀ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပြီးပြည့်စုံသောကာကွယ်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာဖုံးများသည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်အလုပ်ခွင်တွင်သင်အပြင်ထွက်သည့်အခါအာမခံချက်ကိုပေးသည်။
အထုပ်အရေအတွက် - တစ်ခါသုံးမ ၀ တ်နိုင်သောမျက်နှာဖုံး ၅၀
ခွဲစိတ်ကုသမျက်နှာဖုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး အကောင်းဆုံးမျက်နှာဖုံး တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး အပူခံနိုင်သောမျက်နှာဖုံး